Wasiirka Arrimaha Dibbada Dalka Qadar Oo Maanta Booqasho Ku Tegeya Dalka IRAN – somalilandtoday.com
(SLT-Iran)-Wasiirka arrimaha dibadda Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa la filayaa inuu u safro Tehraan Khamiista maanta ah si uu arrimaha gobolka uu ugala hadlo mas’uuliyiinta ugu sarreysa Iran.
Safarka ayaa yimid ka dib markii Al Thani, oo sidoo kale ah raysal wasaare ku xigeenka Qatar, uu salaasadii wadahadal telefoonka kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran Hossein Amirabdollahian.
Sida ay ku warantay wakaalada wararka Qatar ee QNA, labada diblumaasi waxay dib u eegis ku sameeyeen xidhiidhka labada dal, waxayna ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa dhinacyo kala duwan. Waxay sidoo kale ka wadahadleen isbeddelladii ugu dambeeyay ee gobolka iyo arrimaha khuseeya labada dhinac.
Booqashada uu ku tegayo Wasiirka Arrimaha Dibbada Qadar dalka Iran ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli uu ka dib curanayo dagaal cusub oo ka socda Yemen.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, fallaagada Xuutiyiinta ee xulafada la ah Iran ayaa dhowr gantaal ku soo riday dhanka Imaaraadka Carabta. Imaaraadku waxa uu xubin ka yahay isbahaysiga millatari ee Sucuudigu hoggaamiyo ee taageeraya dawladda Yemen.
Colaadda ayaa waxaa ilaa hadda ku dhintay tobanaan kun oo qof, iyadoo ay ku barakeen malaayiin kale, waxaana ay dhaliyeen waxa Qaramada Midoobay ay ku tilmaantay dhibaatada bini’aadantinimo ee ugu xun adduunka.